June 2, 2021 N88LeaveaComment on सेनाकी एक जवानले गरिन् सुत्केरीको जीवन रक्षा
धनुषा । कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरको कारण ब्लड बैंक जनकपुरधाममा रगतको अभाव भएको बेला नेपाली सेनाका एक महिला सैनिक जवानले रगत दिएर एक सुत्केरीको जीवन रक्षा गरेकी छन् । सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका—२ बस्ने रीनादेवी गुप्ता सुत्केरी हुने क्रममा शरीरबाट अत्यधिक रक्तस्राव भई गम्भीर अवस्थामा श्रीराम अस्पतालमा उपचारार्थ रहेकी थिइन् । रगत नपाएर निराश भएको अवस्थामा […]
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत चुरे दोहनलाई मार्गप्रशस्त गर्न लिएको नीतिलाई आफ्नो पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको जनाउनुभएको छ । उहाँले आज एक वक्तव्यमार्फत विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गरिंदा त्यसले पानीका स्रोतहरु सुक्न थालेको, भू–क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषण गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ […]
June 2, 2021 N88LeaveaComment on काेराेनाकाे थप तीन नयाँ भेरियन्टको नाम जिटा, इटा र थिटा राखियो
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले थप तीन भेरियन्टलाई ग्रीक अल्फाबेटअनुसार विभिन्न नाम दिएको छ । अहिले नयाँ नाम दिइएका तीनओटा भेरियन्ट अफ कन्सर्न (भीओसी) हरुमा जिटा (पी.२), इटा (बी.१.५२५) र थिटा (पी.३) छन् । यिनीहरुको जनस्वास्थ्यमा कति असर पर्छ भन्ने अध्ययनकै क्रममा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले बताए । […]
June 2, 2021 N88LeaveaComment on बाबुको लास नउठ्दै ऋण असुल्न पुगेका साहुले छोरीको कुरा सुनेर उल्टै १५ लाख दिए
गाउँमा एकजना भलाद्मी मानि`सकाे नि धन भएछ । उसका छाेरा`हरू र छर`छिमेक मिली ला स जलाउन लैजाने तयारी भइ`रहेको समयमा एक अपरिचित व्यक्ति आउँछ र ला स को पाउ समात्दै भन्न लाग्छ “म र्ने मानिसले मसँग १५ लाख लिनु भएकाे थियाे, पहिला मला`ई उक्त पैसा कसले तिर्ने भन्नुहोस्, त्यस`पछि मात्र ला स काे दाहसं स्कार […]
June 2, 2021 N88LeaveaComment on माधव नेपाल गुटका धुरीखाँबाे मानिएका यी ४ जनाले पार्टी फुटाए ओलीलाई नेता मान्छाै भनेपछि रन्थनिए माधव
काठमाडौं । फुटको संघार पुगेको नेकपा एमालेलाई दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले तत्कालका लागि सुपर ग्लु लगाएर टालिदिएका छन् । नेकपा एमालेको स्थायी समिति बैठकले माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहितका दर्जन बढी नेताहरुलाई एमालेबाट साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बन गरेपछि नेपाल समूहका दोस्रो पुस्ताका नेता घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र गोकर्ण बिष्टले माधव नेपाललाई पार्टी फुटाए […]
सुनिल उलक जर्मनीको नाजी पार्टीका तत्कालीन नेता अडोल्फ हिटलरले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई हल्का हरियो रङको १९३६ मोडलको डेमरल बेन्ज कार उपहार पठाएका थिए । उक्त कार नं. ४४ को थियो जुन जुद्धशमशेरको प्रिय गाडी भयो कार मनपर्नुको प्रमुख कारण जर्मनीको नाजी पार्टीका तत्कालीन नेता अडोल्फ हिटलरबाट उपहारमा पाएको हुँदा पनि खास विशेष हुने नै भयो। चन्द्रशमशेरका […]
बीबीसी । विश्वको इतिहास हेर्दा लगभग सबैजसो देशमा सत्ताका लागि दाउपेच, छलकपट, लडाइँझगडा र काटमार भएको पाइन्छ। प्रजातान्त्रिक प्रणालीको आरम्भ भएपछि जनताबाट चुनिएर जानेहरू सत्तामा पुग्दा पनि सत्ताधारीबीच पदप्रतिष्ठाका लागि दाउपेच हुने गरेको देखिन्छ। जनताबाट चुनिने व्यवस्था नभएका बेला त त्यस्ता दाउपेच र षड्यन्त्र अझै बढी हुने गर्थे। त्यसै क्रममा आधुनिक नेपालको इतिहासमा पनि केही […]
June 2, 2021 N88LeaveaComment on कोरोना संक्रमण भए–नभएको अब कुकुरले पत्ता लगाउने , पीसीआर टेस्ट भन्दा प्रभावकारी
एजेन्सी । एक खास नश्लको कुकुरले सुँघेरै कोरोना संक्रमण भए–नभएको पत्ता लगाउन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ। ल्याब्रडोर जातको तालिमप्राप्त कुकुरले गरेको कोरोना परीक्षण नतिजा पिसिआर वा एन्टिजेनभन्दा प्रभावकारी पाइएको छ। विभिन्न देशको प्रारम्भिक अध्ययनबाट यस्तो निष्कर्ष निस्केको अमेरिकी अखबार ‘द न्यूयोर्क टाइम्स’ ले जनाएको छ। अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, चिली, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी, थाइल्यान्ड लगायत थुप्रै […]
काठमाडाैं । नेपाल भूपरिवेष्ठित राज्य हुँदाहुँदै पनि एक समय पानीजहाज भित्र्याएर देशको उन्नति गर्ने सोच बनेको थियो। सन्दर्भ विसं २०२५ तिरको हो। त्यति बेला भारतमा पानीजहाजको क्षेत्रमा सिन्धिया स्टिम नेभिगेसन कम्पनी र इस्टर्न नेभिगेसन कम्पनी प्रख्यात थिए। भारतीय नीतिका कारण ती कम्पनीका जहाजले पाकिस्तान, बर्मा, चीनलगायतका मुलुकसम्म बिनारोकतोक आवतजावत गर्न पाएका थिएनन्। तर, चिनियाँ पानीजहाज […]